२५ करोड लाग्ने बारे, सियोनाका बाबाले गरे खुलासा (भिडियो हेर्नुस्) | Public 24Khabar
Home News २५ करोड लाग्ने बारे, सियोनाका बाबाले गरे खुलासा (भिडियो हेर्नुस्)
२५ करोड लाग्ने बारे, सियोनाका बाबाले गरे खुलासा (भिडियो हेर्नुस्)
बरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञा डा. सन्दीप श्रेष्ठ र नर्स एलि’ना गुरुङको १० महिने छोरी सियोना श्रेष्ठ स्पाइनल मस्कु’लर एट्रोफी रोगसँग ल’डि’रहेकी छन् । सियोनाको उपचा’रको लागि ठूलो रकम लाग्ने उ’नकी आमा एलिना गुरुङले बताएकी छन् । उनका अनु:सार आफ्नो छोरी सियोनाको उप:चारको करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अस्पता’लले जनाएको छ ।
यस रो’गको उ:पचार नेपालमा सम्भव नभएको तर, अमेरिकामा मात्रै सम्भव भएको सियोनाका आमा एलिनाले जानका’री गराएकी छन् । छोरी सियोनाको उपचारको लागि तत्काल पैसाको जो’हो गर्नुपर्ने बाध्यता श्रेष्ठ दम्पतीमाथि थपिएको छ । यस रोगको उपचार २ वर्षभित्र गरिस’क्नुपर्ने श्रेष्ठ दम्पतीको भनाइ छ । अब १ वर्षभित्र उक्त रोगको उपचार सुरु गरिसक्नुपर्ने सियोना’की आमा–बुबाको भनाइ छ ।
उनले आफ्नो छोरीलाई बचाउन सहयोग गर्नका लागि सबैलाई अपिल गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जा’लमा आएका नकारात्मक टिप्पणीका कारण आफुहरु निकै दुखी भएको बताएका छन् ।
छोरीकै लागि श्रीमानले डाक्टरी पेशा:को काम समेत छोडेको र आफुले पनि जा:गिर छोडेर छोरीको उप’चारमा लागेको बताएकी छन् । उनले एउटा मात्र नराम्रो टिप्पणीले सहयोग गर्न चाहनेह’रुलाई नराम्रो असर गर्ने भएकाले त्यस्तो न’कारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेकी छन् ।
Previous articleभर्खरै भारत-चीन भि’ डन्तमा अमेरिकाले हस्त* क्षेप गरेपछि त* नाव, अमेरिकालाई चीनको ड* रलाग्दो चेता*वनी !
Next articleभर्खरै आयो हाे स् उड्ने खबर, बालुवाटारमा खैला बैला ! विप्लवको यस्तो घोषणा